Tag: ụlọ ọrụ dijitalụ na-ere ahịa
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ nwere njiri mara njikarịcha nchọta yana enwere ọtụtụ ngwaọrụ na ahịa maka SEO, ha na-elekwasị anya na ntinye nke SEO ma ọ bụghị njikwa ndị ahịa. E wuru ViduPM kpọmkwem maka ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na SEO iji jikwaa, rụkọta ọrụ, kọọ, yana ọbụlagodi ndị ahịa SEO gị. Atụmatụ ViduPM Gụnyere: SEO Project Management - Project Management na-abụ echiche dị mkpa maka njikwa Team dị mma. Njikwa SEO - ViduPM na-akwado
Izu a, m na-agụ ọkwa si ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ na ihe kpatara ị ga-eji were ha. Ihe mbu na mbu bu ihe omuma ahia dijital. Amaghị m na m kwenyere na nke ahụ - ọtụtụ ụlọ ọrụ anyị na ha na-arụkọ ọrụ nwere ngalaba azụmaahịa ebe ha nwere ọmarịcha nka ma anyị na-amụkarị ihe n'aka ha dịka ha na-amụta n'aka anyị. Ihe 5 kpatara ị ga - eji zụta ụlọ ọrụ na - ere ahịa dijitalụ